तीन बर्षदेखी बेपत्ता महिलालाई खोज्न सबु सुनुवारको पहल | Kattwal.com
तीन बर्षदेखी बेपत्ता महिलालाई खोज्न सबु सुनुवारको पहल
धनगढी, १५ बैशाख : खाडी मुलुक ओमानमा तीन बर्षदेखी बेपत्ता महिलालाई खोज्न ओमनस्थित नेपाली एकता समाजले पहल थालेको छ । रोजगारीका लागि ओमन पुगेकी झापाकी अन्दाजी ४४ बर्षिय नेत्र कुमारी राउत सम्पर्क बिहिन भएकी थिइन् ।
रोजगारीको क्रममा १३ बर्षदेखी ओमान आउजाउ गर्ने राउत तीन बर्षअघि सम्पर्क बिहिन भएको उनको परिवारले जानकारी दिएको छ ।
राउत परिवारले खोजी गरिदिन आग्रह गरेपछि ओमान नेपाली एकता समाज की महासचिव सबु सुनावारले राजधानी मस्कटस्थित राजदुतावासमा खोजीका लागि अप्रिल २ मा लिखित निवेदन दिएको थियो । हालसम्म उनको अबस्था बारे अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
सबु सुनावारले राजदुतावासमा दिएको यस्तो छ निवेदनको पूर्णपाठ :
श्रीमान महामहिम राजदुत ज्यु
नेपाली राजदुताबास मस्कट ओमान
बिषय : नेत्र कुमारी राउतको सम्बन्धमा
उपरोक्त सम्बन्धमा ०४/०२/२०२० मा न्युज 24 को सिधा कुरा जनतासग कार्यक्रममा झापाबाट लाइभ आएर नबिन राउतले आफ्नी आमा नेत्र कुमारी राउत बिगत ३ बर्षदेखी ओमानबाट सम्पर्क बिहिन भएको र खोजी गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछी ओमानमा सबै संघसंस्थाले चासो राखे अनुसार नेत्र कुमारी राउत सललाहमा भेटिएको अपुस्ट खबर आएको छ। प्राप्त खबर अनुसार उहा काम गर्ने घरदेखी चार घरको दुरिमा शान्ती नामले चिनिने नेपाली महिलाले आफ्नो पर्सनल काम लगाएर राखेको पाइएको छ र उक्त शान्ती भनिने महिला आफ्नो परिचय दिन र कोहिसग पनि सम्पर्क गर्न चाहनु हुन्न ।
रानाको भनाइ अनुसार शान्तिलेनै नेत्र कुमारिलाइ नेपालबाट ल्याएको र उनिले अबैधानिक बाटोबाट नेपाली महिलाहरुलाइ ओमान ल्याएर काम लगाउने गरेको पाइएको छ । शान्तिको आशासंगको भनाइ अनुसार उनले मानसिक सन्तुलन गुमाएको छन । एक बर्ष भिसा बाकी छ त्यसपछी म आफै नेपाल पठाउछु पैसा उहाको ज्वाइको नाममा पठाइदेको छु ।
अब यस्तो अबस्थामा शान्ती भनिने महिला को हुन ? कस्तो भिसा हो ? ज्वाइलाइ पैसा पठाको भए खोजी किन भयो ? बिरामिलाइ उपचार नगरी घर नपठाइ काम लगाएर राखिएको पाइएको हुँदा मानबियताको नाताले हामी दूतावाससंग सत्यतथ्य बुझी आवस्यक कार्बाहीको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
ओमान नेपाली एकता समाज
स्याङ्जा : मोतीयाबिन्दुका ४३ बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया